အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် Pretzel ကိုဘယ်လိုစားရမလဲ။ | Martech Zone
အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် Pretzel ကိုဘယ်လိုစားရမလဲ။
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2007 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2007 Douglas Karr
အင်္ဂါနေ့မှာငါ Indianapolis ကနေ Tampa အထိ Atlanta အထိလေယာဉ်ခရီးစဉ်နဲ့ Indianaapolis ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းများ (သို့) မိသားစုထံလည်ပတ်ရန်အချိန်မရှိခဲ့ပါ။ (သူတို့အားပြောပြရန်ပင်ကျွန်တော်မခေါ်ခဲ့ပါ။ ) အစည်းအဝေးတစ်ခုသာတက်ခဲ့ပြီးလေထဲတွင်ပြန်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အတူလုပ်ခဲ့ကြသည် Airtran ငါအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါကလိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာအတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Tags: 2011blogworld ကုန်စည်ပြပွဲblogworld Los Angeleswordpress အပေါ်ဆုံးဘား
ဘလော့လှုပ်ရှားမှုနေ့ - ရေနှင့်ရေနံ
19:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 42
မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား! ဒီဟာလေးနက်တဲ့ packet လား ??? သူတို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြပါသလား။ တကယ်တော့ဒါဟာတော်တော်လေး gimmicky ပါ၊ ခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာ ... ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် .... ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါဖတ်တဲ့အခါငါမယုံဘူး
19:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 56
အံ့သြစရာပဲ။ ငါလည်းနို့စို့ကလေးပါ။ ထုပ်ပိုးရဲ့ခ / c ပဲအိတ်ကိုငါစားချင်တယ်၊ ငါက pretzels တောင်မကြိုက်ဘူး။
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 49
ဒါဟာလိမ္မာပါးနပ်တယ်၊ ငါသူတို့ကိုငါပေးမယ်၊ ဒါကြောင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထုတ်ပေးလျှင်ငါတွေးမိ။
Air Tran သည်စျေးကွက် / လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းမှုအတော်အသင့်ရှိပြီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားထုတ်မှုထက်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အားထုတ်မှုသာဖြစ်နိုင်သည်။
20:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 18
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကနေ Orla၊ Fla ကနေ Orla သို့ပြန်လာတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှာစားခဲ့တဲ့ pretzels အိတ်တစ်ချောင်းရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မင်းရဲ့ post ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျွန်မအံ့သြမိတယ်။ အံ့ advertising စရာကောင်းတဲ့ကြော်ငြာမဟုတ်လား။
တကယ်တော့ဒီ post ကမင်းကိုမှတ်ချက်ရေးဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကိုငါ့ဘလော့မှာဘာကြောင့်ပြhavingနာတက်ရတာလဲလို့မင်းကိုမေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ပဲ။ မင်းရဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးစာမေးပွဲကိုပို့ပေးပါလို့လူများစွာကိုငါတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်အီးမေးလ်ကိုမလာပါဘူး
ငါစဉ်းစားနိုင်တာတစ်ခုကတော့မင်းရဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံထဲထည့်လိုက်တဲ့အီးမေးလ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ admin panel ထဲမှာငါသုံးတဲ့အီးမေးလ်ပဲ။ ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်မလား
23:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 29
ပြtheနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမသေချာဘူး ကျွန်ုပ်ထံပေးပို့သောစာမျက်နှာနှင့်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်ပုံစံဖြင့်အီးမေးလ်ပို့ပါ။ WordPress ၏မေးလ်စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကဲ့သို့သတင်းစကားတစ်ခုပို့သင့်သည်။
23:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 49
မင်းရဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံကိုမင်းတောင်းခံပြီးဖြည့်လိုက်တာနဲ့ငါ့ပုံမှန်အီးမေးလ်လိပ်စာ (stephen (at) sjhopson (dot) com ကိုငါတကယ်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်၊ သင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းဆီကဘယ်တော့မှမကြားခဲ့ဘူး။ ) သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံမှားနေပါတယ်
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကို sjhopson (at) yahoo (dot) သို့ပြောင်းလိုက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်ရှိသင်၏အဆက်အသွယ်ပုံစံမှတစ်ဆင့်သတင်းစကားများသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။
stephen (at) sjhopson (dot) com လိပ်စာသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အီးမေးလ်လိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနေသည်ဟူသောအချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ အဲဒါနှင့်အတူဘာမှရှိနိုင်မလား?
ငါရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ ​​ငါ့ရဲ့အဓိကအီးမေးလ်လိပ်စာကိုငါမသုံးမိအောင်တားဆီးတာဟာဘာလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး၊ သင်အဆက်အသွယ်ပုံစံကမက်ဆေ့ခ်ျတွေပေးပို့ဖို့အသုံးပြုတဲ့လိပ်စာအတိုင်း stephen (at) sjhopson (dot) com ဖြစ်တယ်။
Davina K. ဘရူ
23:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 6, 49
ဒေါက်ဂလပ်, ငါသည်လည်း AirTran ၏ဇန်န ၀ ါရီ၏နှစ်သက်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ အဲဒီမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အမှတ်တံဆိပ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပဲစမတ်နည်းလမ်း